1. Ny fetin'ny fahasambarana dia manakaiky ny faran'ny taona. Betsaka ny olona manomana fanomezana amin'ny Taom-baovao. Na hanao izany ny tenanao Na mividy fanomezana homena ny olon-tianao Ary maro ny reny angamba no manomana fanomezana ho an'ny zanany mba hidiran'izy ireo amin'ny fahafinaretana miaraka amin'ny namany any am-pianarana. Ankehitriny, manana fomba famonosana boaty toradroa isika. Ho fanomezana na handravaka ny zoron'ny Krismasy tsara tarehy izay tsy sarotra Izy io koa dia manome fahatsapana tena mahafa-po ho an'ny mpanome sy ny mpandray.
2. FITAOVANA Ahoana ny famonosana boaty toradroa
3. - Fonosana fanomezana Misafidiana amin'ny fomba itiavantsika na mampitovy ny fomban'ny olona manome. Ho an'ny olon-dehibe, safidio ny loko tsotra, ho an'ny ankizy, dia sary môtô izy ireo. Na modely mareva-doko mahafatifaty - tsipìka na kofehy, mifidiana amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny lokon'ny taratasy. Mety ho mitovy ny feony na ny volon-doko, ny olona sasany mampiasa voninkazo maina, voninkazo vaovao, na mora ataonao irery, dia chic tsotra fotsiny amin'ny fomba hafa. Azo ampiasaina Fa raha ho an'ny vahiny lehibe na ny sefo dia mety ilaina ny misafidy boaty iray miloko tsotra, arakaraka ny fotoana sy ny mety.
4. Fomba mora fonosana boaty na boaty fanomezana
5. - Ataovy eo amin'ilay taratasy fonosana izay efa nendahina ny boaty fanomezana. Ary apetraho amin'ny zorony roa ny zoron'ny boaty, mifanila amin'ny lafiny ½ amin'ilay boaty ampiasaina sy ny ambony ¼ amin'ilay boaty araka ny aseho amin'ny sary voalohany, izay tsy maintsy manapaka ny sisin'ny mitovy habe aminy. Ho an'ny fahadiovana sy ny hatsarana Araka ny haben'ny boaty izay nofidintsika. - Raiso ny taratasy handrakofana ny antsasaky ny boaty. Dia apetaho lakaoly na kasety roa sosona. - Ento ny ilan'ny taratasy aforitra miaraka amin'ny lakaoly. Na adhesif misy sisin-droa - kasety indray hahazoana matanjaka sy azo antoka Tena tsy tokony hivoaka - tampon'ny boaty Tsindrio ny afovoany mba hifanaraka amin'ny sisiny. Ary aforeto tsara ny sisiny - ary avy eo dia avoaka toy ny hita eo amin'ny sary Apetaho ilay kasety mangarahara - afatory toy ny sary ny kofehy. Na mety tsy mitafy azy ny sasany aminareo, arakaraka ny safidinao sy ny fahaizanao mamorona azy.
6. Ny haingon-trano boaty tsara tarehy manampy loko sy fahasambarana ao amin'ny fianakaviana.
7. Mandritra ny Noely Ny boaty dia azo fonosina amin'ny habe sy loko isan-karazany ary apetraka ao ambanin'ilay hazo. Na asio fanomezana maromaro ao anaty boaty hahafahan'ny ankizy mifaly amin'ny fanokafana ny fanomezana voarainy. Alao an-tsaina izany hoe manana Dadabe Noely izany. Mitondrà fanomezana Fahafinaretana bebe kokoa Ary manao saribakoly ho an'ny trano sy ny fianakaviana amin'ny fomba hafa Afaka manao izany amin'ny fomba tena tsotra ianao, miampy boaty mifono fonosana Namboarina tamim-pitiavana Ny mpandray dia hiaina fikarakarana sy fanasoavana. Ary koa ny famoronana tsy manam-petra koa Aorian'izay dia andao hiomana hanao boaty fanomezana toa antsika !!